Zizowushaya kungekudala kumsakazi kamaskandi oyintandokazi | News24
Why we should ignore election result polls
Zizowushaya kungekudala kumsakazi kamaskandi oyintandokazi
Durban - NgoMgqibelo umndeni kaNonhlanhla Ngcobo odume ngelikaMdonso uzokwamukela izinkomo zamalobolo endodakazi yawo.
Imibiko ithi isoka lale ntokazi esakaza umculo kamaskandi kuZululand FM lihlele ukuzishaya ziphelele izinkomo futhi likhiphe nezibizo ngosuku olulodwa.
Le ntokazi ithi sekunesikhathi eside ilangazelela ukuthola umaqondana ozoyithatha, kanti bese kukhona namahlebezi azungezayo okuthi ithandana nabantu abaningi njengoba bekungaziwa kahle-hle ukuthi ithandana nobani.
OLUNYE UDABA:Lidayisa "okwamagwinya ashisayo" ebusika eleGcokama Elisha
UMdonso utshele abeLANGA leTheku ukuthi lokhu okwenzekayo kuyena kuchaza ukuthi usengena kwesinye isigaba sempilo njengoba esezoba wumama umfundisi kwazise ulotsholwa wuMfundisi uNathan Potter webandla i-Open Door Assembly elizinze eShowe.
Le ntokazi ithi ayikholwanga ngesikhathi isoka layo liyitshela ukuthi lifuna ukuthumela abakhongi.
UMdonso uthe bakhethe ukwenza yonke into ngosuku olulodwa ukuze bagweme ukwenza imicimbi eminingi onyakeni owodwa.
"Sineminyaka emithathu sithandana kodwa indlela akhombise ngayo uthando kimina ingenze ngazibona ngingumuntu wesifazane osekulungele ukuphatha umuzi," kusho yena ezwakalisa intokozo yakhe ngalokhu.